Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Ibotta 2022: Ibotta Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Haddii aad raadineyso siyaabo aad ku keydiso lacag dukaameysiga, markaa hubaal waad jeclaan doontaa barnaamijka Ibotta. Iyada oo Ibotta, waxaad ku kasban doontaa lacag-celin lacageed dukaanka dukaanka iyo intarneedka labadaba. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa taleefankaaga gacanta ama kombiyuutarka.
Tusaale ahaan, markaad ka dukaameysato dukaamada waaweyn sida Walmart, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka Ibotta si aad u bixiso alaabta. Kadib, waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa rasiidhadaada barnaamijka oo aad ku soo ceshan kartaa lacag caddaan ah 24 saac gudahood.
Iyadoo aan loo eegin tan, dadka qaar ayaa weli shaki ku jira haddii Ibotta ay tahay mid sharci ah ama khiyaamo.
Markaa annaga oo isku dayeyna inaan ka bixino jawaab ku habboon tan, waxaan ku samaynay dib -u -eegis barnaamijka Ibotta. Halkan, waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan Ibotta, waxa ay tahay, sida ay u shaqayso, haddii ay bilaash tahay, is-qoritaanka, faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka, iyo inbadan.
Waa maxay Ibotta?
Waxaa aasaasay 2012 Bryan Leach, Ibotta waa abaalmarin lacag -celin oo lacag -la'aan ah iyo barnaamij lacag -bixin ah oo ku siinaya lacag caddaan ah oo wax -iibsi maalin kasta ah markaad wax ka iibsaneyso oo aad ku bixinayso barnaamijka.
Tan iyo markii la aasaasay, Ibotta waxay bixisay in ka badan $ 600 milyan oo abaalmarin lacageed ah in ka badan 35 milyan oo isticmaale.
App -ku wuxuu siiyaa kumanaan siyaabood macaamiisha inay ku kasbadaan lacag caddaan ah iibsigooda iyagoo iskaashi la samaynaya in ka badan 1,500 magac iyo tafaariiqle.
Marka, haddii aad iibsanayso raashinka, dharka, elektaroonigga, ama khamriga iyo biirka, Ibotta ayaa ku siin doonta lacag caddaan ah iibsiyadaada. Xaqiiqdii, Ibotta waxay bixisay in ka badan $ 600 milyan oo abaalmarin lacageed ah in ka badan 35 milyan oo isticmaale tan iyo markii la aasaasay 2012.
Darajada App -ka Ibotta
Barnaamijka Ibotta ayaa hadda kaalinta #31 ka galay dhammaan barnaamijyada Dukaamaysiga ee Dukaanka App oo leh qiimeyn 4.8-xiddig oo cajiib ah (5 ka mid ah) iyo in ka badan 935,300 dib u eegis.
Google Playstore-ka, waxay kaloo leedahay qiimeyn 4.3-xiddig ah (oo ka baxsan 5) iyo in ka badan 478,690 dib-u-eegis Google Playstore.
Ibotta ma Xor baa?
Haa, Ibotta 100% waa bilaash si loo soo dejiyo oo loo isticmaalo. Ma jiraan wax kor -u -qaadis ah ama khidmadaha xubinnimada nooc kasta ha ahaadee; gabi ahaanba waa bilaash inaad soo dejiso.
Waqtiga kaliya ee aad lacag ku bixinayso waa tafaariiqleyaasha si aad u hesho lacag caddaan ah. Marka, maadaama aad dukaameysaneyso, waa go'aan sahlan inaad adeegsato abka oo aad dib u hesho lacag caddaan ah.
Si kastaba ha ahaatee, ka taxaddar inaadan qarash badan ku bixin ama aadan iibsan wax aadan caadi ahaan iibsan. Horaa loo yidhi, dinaar badbaadiyey waa dinaar la kasbaday.
GOOGLE soo dejiso
DUGSIGA APP DOWNLOAD
Si aad ugu qorto Ibotta onlaynka, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad geliso magacaaga koowaad, cinwaanka emaylkaaga, eraygaaga sirta ah, taariikhda dhalashada (waa inaad 21 jir tahay ama ka weyn tahay), sibka, iyo jinsiga. Waxaad kaloo geli kartaa koodh gudbin.
Si kastaba ha noqotee, si aad dhab ahaan u isticmaasho Ibotta, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso barnaamijka.
Sidee Ibotta u shaqeeyaa?
Asal ahaan, Ibotta waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo ceshado lacag caddaan labadaba goobaha tafaariiqda iyo marka aad wax ka iibsaneyso internetka.
#1 Kayd Online Money
Waxaad dib ugu heli kartaa lacag caddaan ah iibsiyadaada onlaynka ah marka aad wax ka iibsanayso biraawsarka biraawsarka Ibotta ama aad ku booqato dukaamada tafaariiqda ee internetka barnaamijka Ibotta.
Waxa kale oo aad ka dalban kartaa safarkaaga Expedia, Orbitz, Hotels.com, iyo in ka badan si aad u hesho abaalmarin markaad ku bilowdo Ibotta.
Adigoo adeegsanaya barnaamijka Ibotta isla markiiba, waxaad lacag ku keydisaa in ka badan 140 tafaariiqleyaal internetka ah, laga bilaabo xarumaha wax laga iibsado ee internetka sida Amazon, Walmart, iyo Target ilaa dukaamada khaaska ah sida Casper, Petco, iyo Backcountry.
Si aad lacag ugu keydiso internetka, fur barnaamijka, oo dooro Shopping Online. Waxaa lagu tusi doonaa liiska dalabyada hadda jira. Hadda, guji Dukaan ka dibna ku iibso internetka sida aad caadiyan u samayn lahayd.
Marka iibsigu dhammaado, si otomaatig ah ayaad ugu shubi doontaa koontadaada.
#2 Hesho In-Store
Si aad u hesho abaalmarin marka aad dukaanka ku dhex dukaameysanayso barnaamijka Ibotta, raac tallaabooyinkan:
Marka hore, fur barnaamijka oo guji badhanka Soo -jeedimaha Hel.
Kadib, ku dar dalabyada aad xiisaynayso koontadaada. Haddii aad qorshaynayso inaad wax ka iibsato dukaanka aad jeceshahay (aan dhahno Bartilmaameedka), waxaad shaandhayn kartaa dalab kasta oo u gaar ah astaantaas.
Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad ka jawaabto sahan degdeg ah oo ku saabsan badeecada aad ku darayso. Kuwo kale, abka ayaa laga yaabaa inuu muujiyo cunto karis la xiriira badeecada.
Ka dib marka la aqoonsado dalabyada aad xiisaynayso, waxa xiga ee la samaynayaa waa inaad dukaamaysiga aado. Booqo dukaanka Bartilmaameedka ee xaafaddaada oo u iibso sida aad caadiyan ahaan jirtay.
Marka xigta, soo rar rasiidkaaga Bartilmaameedka adiga oo adeegsanaya kaamirada kaamerada app si aad u hesho lacag caddaan ah. Caadiyan marka rasiidka la soo dhejiyo, Ibotta ayaa si toos ah u tixraacaysa dalabyadii aad horay u dooratay ka hor intaadan wax iibsan oo aad soo iibsatay rasiidhkii.
Mar haddii ciyaar la helo, waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad rabto inaad soo ceshato dalabka lacag caddaan ah. Haddii wax walba u muuqdaan kuwo wanaagsan, waad ka shaqayn kartaa rasiidka, adiguna waa diyaar!
#3 Xiriirinta Xisaabaadka Daacadnimada
Sida barnaamijyada dukaamaysiga badankooda, Ibotta waxay xiriir la leedahay inta badan tafaariiqleyaasha waaweyn. Sidaas oo kale, waxay sidoo kale ku xiran tahay xisaabaadka daacadnimo ee tafaariiqleyda.
Si aad u xiriiriso koonto daacadnimo, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa: fur barnaamijka oo dooro tafaariiqlaha aad qorsheyneyso inaad booqato. Kadib, dhagsii “badhanka Xisaabta Xisaabta” ee sare ee appka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo gudbiso macluumaadka koontadaada daacadnimada ee hadda jira ama aad saxiixdo mid cusub.
Markaad dhammaystirto hawshan, Ibotta ayaa si otomaatig ah kuugu soo celin doonta lacag caddaan ah oo aad ku iibsatay dukaankaas - waa haddii aad isticmaashay kaarkaaga daacadnimada marka aad dhammaynayso macaamilka.
Tilmaamahan gaarka ahi aad buu ugu habboon yahay dad badan maxaa yeelay waxay meesha ka saareysaa tallaabadii gacanta lagu gelinayay rasiidhada kadib markaad wax iibsatay.
#4 Ku bixi Ibotta
Waxaad ka adeegan kartaa in ka badan 50 dukaan oo caan ah iyo maqaayado adoo adeegsanaya barnaamijka Ibotta.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad isticmaasho Pay with feature Ibotta, markaa isla markiiba waxaad kasban doontaa lacag caddaan ah iyo qiimo-dhimis ku saabsan iibsashada qof-ahaaneed isla markiiba barnaamijka Ibotta. Waxa kale oo aad kaydin kartaa ilaa 10% isla markiiba adiga oo aan isticmaalin wax rasiidh ah.
Markaa si aad ula Bixiso Ibotta, marka hore waa inaad ku darto kaarkaaga deynta ama kaarkaaga koontadaada Ibotta (hoosta qeybta Bixinta). Kadib samee iibsiyadaada oo tus Pay -ka koodhka kaarka hadiyadda ee Ibotta khasnajiga marka aad bixineyso. Isla markiiba khasnajiyuhu wuxuu baadhaa koodhkan, waxaad bixin doontaa alaabtaada oo isla markiiba dib ayaad u soo ceshan doontaa lacag caddaan ah.
Hadda, haddii aad si joogto ah wax uga cunto Chipotle, Applebee's, Olive Garden, Steak and Shake, Peet's Coffee, ama Texas Roadhouse, waxaa laga yaabaa inaad ka hesho astaantan qaasatan raashin. (Eeg waxa aan halkaas ka sameeyay ?!)
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Ibotta
Haddii aadan weli adeegsan barnaamijka Ibotta, waxaan samaynay xoogaa natiijooyin xiiso leh intii aan fulinay dib -u -eegista.
Ugu horrayn Ibotta waa xalaal ee maaha khiyaamo. Waxa kale oo ay ka mid tahay barnaamijyada wax iibsiga ee ugu sarreeya dukaammada ciyaarta iyo barnaamijyada kala duwan.
Iyadoo aan loo eegin tan, appku wuxuu leeyahay cillado u gaar ah. Marka, si aad u ogaato haddii adeegsiga barnaamijka Ibotta ay mudan tahay, si taxaddar leh u dhex mari faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka hoose.
App -ka Ibotta waa 100% bilaash in la isticmaalo.
Lacag -celinta waxaa laga heli karaa inta badan tafaariiqleyaasha qaranka.
Hab fudud oo lacag loogu keydiyo iibsashada maalin kasta.
Ibotta kaliya waxay xiriir la leedahay tafaariiqleyaasha waaweyn iyo magacyada waaweyn.
Taageero macmiilkeeda ama adeeggeedu wuxuu u muuqdaa mid ka maqan.
App -ka Ibotta wuxuu raadiyaa goobtaada intaad dukaamada ku jirto.
Booqo bogga rasmiga ah ee hoose si aad wax badan uga ogaato barnaamijka oo aad dib -u -eegis ugu samayso.
Ibotta waa app xalaal ah oo aad ku kasban karto lacag caddaan ah oo dhab ah. Si kastaba ha ahaatee, si aad lacag uga hesho Ibotta, marka hore waa inaad lacag ku qarashgareysaa dukaamaysiga waaweyn. Taas ka dib, waxaad heli doontaa lacag -celin, taas oo lagu soo furan karo PayPal ama kaararka hadiyadda.
Barnaamijyada ugu Fiican ee Bilaashka ah ee Xaddida Waqtiyada Qalabkaaga | 2022
Sida Loogu Kordhiyo Barnaamijyada Qoraalka Ilmaha Dabka Kindle | Hagaha Fudud ee 2021
Dabka Kindle waa xarun madadaalo dhijitaal ah oo ay samaysay Amazon. Asal ahaan, Kindle Fire waxaa loo dhisay inuu kaa caawiyo inaad hesho…
Had iyo jeer waa wax lagu farxo in la helo kaarka hadiyadda Xbox ee bilaashka ah ee ciyaaraha iyo madadaalada. Ma waxaad raadineysaa…
Instagram waa xoog dabiici ah. Maxay ahayd uun barnaamij wadaag-wadaag sawir markii hore noqday mid ka mid ah…
Qof kastaa wuu jecel yahay muusigga laga bilaabo Injiilka ilaa Hip Hop, Buluugga, Jazz…liisku wuu socdaa. Horay ayaad akoon u yeelatay...
rabitaanka nooc ka mid ah xakamaynta nolosheena waa mid dareen leh. Rabitaankan hubinta iyo…